कथा: `हाकिमकी श्रीमतीसंग एक पटक´ – Vision Khabar
कथा: `हाकिमकी श्रीमतीसंग एक पटक´
। २ कार्तिक २०७४, बिहीबार १०:२९ मा प्रकाशित
वर्षाको च्याउझै बग्रेल्ती उम्रेका हवाईजहाज कम्पनीहरू भए पनि टिकट पाउन सकिएन । सडकयात्रा अवरूद्ध भएकाले पन्ध्र–बीस दिनसम्मलाई टिकट ‘बुक’ भइसकेको कुरा सबैले बताए । आफूले चिनेका मन्त्रीहरूको ‘सोर्र्स’ समेत लगाइयो तर के गर्ने ? कसैले भन्यो भन्दैमा जहाजवालाहरूले हामीलाई छतमा चढाएर लैजान सक्दैनथे । हैरान परेपछि हामीहरूलाई पैदलै भए पनि हिँडौजस्तो लाग्न थाल्यो । रेडियोमा मुग्लिन–आँबुखैरेनी र मुगलिन नारायणघाटबाहेक अन्यत्र यातायात सुचारू रूपमा सुरू भएको समाचार सुनियो । हामीहरूले भोलिपल्टै हिँड्ने निर्णय गर्याै । हाम्रो टोलीको सबैभन्दा कान्छा चैतन्य आचार्यले बसको टिकट काट्ने जिम्मा लिए ।
रातभरि मुसलधारे वर्षा भइरह्यो । बाँकी बचेको बाटो पनि भत्कने हो कि भन्ने पिरलो लागिरह्यो । बिहानै पाँचबजे हामी चारैजनाले फोनमा सम्पर्क गरेर जाने या नजाने विषयमा फेरि छलफल गर्याै । खल्ती रित्तिंदै गएको अवस्थामा काटिसकेको बसको टिकटको माया मारेर बस्नसक्ने स्थिति थिएन । हाम्रो टोलीका हामी तीन जनाले ‘काका’ भन्ने गरेका राम्रसाद श्रेष्ठले, ‘हिँडौँ साथी हो, जे त पर्ला’ भनेपछि मुसलधार पानीको वास्ता नगरेर बसअड्डा पुगियो ।
बस हिँड्नै लागेको थियो, अगाडिपट्टि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर भएको कार आएर रोकियो । कारबाट गहनै गहनाले ढपक्कै ढाकिएकी एउटी युवती र त्यस्तै सुटबुटमा ठाँट्टिएको एकजना युवक बाहिर निस्के । युवकचाहिँले खल्तिबाट कुनै कागज झिकेर हेर्याे र हाम्रै बसको चालकनिर गएर केही कुरा गर्नथाल्यो ।
श्रीमतीलाई अघि लगाएर हाकिम भित्र पस्यो । सीतारामले उसलाई नदेखेजस्तो गरेर पत्रिका पढेकोजस्तो गर्यो । ‘ओहो सीतारामजी, नमस्कार !’ हाकिमले आफैँले नमस्कार गरेर हात तेस्र्यायो । सीतारामले मन नलागी–नलागी लुलो हात अगाडि बढायो ।
हाकिमको अनुहार हेर्दा उसले सीतारामको कुरा रूचाएको छैन भन्ने प्रस्टै देखिन्थ्यो तर उसले प्रकटमा भने अत्यन्त विनम्र हुँदै हात जोडेर भन्यो, ‘हेर्नुस् सीतारामजी, हामी त प्रशासक हौँ । माथिको आदेश पालना गर्दा कतिपय गल्तिहरू भए होलान् । के गर्ने, जसको सरकार छ, त्यसैका नेताहरूले अह्राएकाे मान्नै पर्याे । तैपनि व्यक्तिगत रूपमा मबाट केही कमजोरी वा अन्यथा भएको भए क्षमा चाहन्छु ।’
चालकले बसको भोंपु बजायो । परिचालकले हाकिमतिर फर्केर भन्यो, तपाईंको गाडी बसको अगाडिबाट हटाउन भनिदिनुपर्यो ड्राइभरलाई । हामीलाई हतार भैसक्यो ।’
‘बाटो खराब छ भनेपछि आफ्नै लाइनमा आउनु नि । एउटाले लाइन मिच्छ दुनियाँलाई आपत । स्साला‘ ।’ हाम्रो बसको चालक भुत्भुताउँदै आएर आफ्नो सिटमा बस्यो ।
‘लौ न दाइ, जुत्ता पनि खोजिदिनुस् न ।’ उसले बडो विनीत भावमा भनी । उसको आग्रहलाई टार्न नसकेर चैतन्य र सीतारामले एकछिन हिलो खोतलखातल पारे तर जुत्ताको पत्तो लागेन । अँध्यारो छिप्पिएर चकमन्न भइसकेको थियो । रामप्रसाद काकाले झोलाबाट टर्चलाइट झिके । हामीहरू फेरि अघि बढ्यौँ । हाकिमकी श्रीमती घरिघरि छुट्थी, काकाले पछाडि फर्र्िकएर उज्यालो देखाउँथे । खालिखुट्टा हिँड्नुपर्दा ऊ बडो कक्रिएकी देखिएकी थिई ।
‘बसमै बसेको भए बरू यो ज्यानले रातभरि अलि सुबिस्ता पाउँदो हो,’ खुइय गर्दै होटलको सिँढीमा बसेर रामप्रसाद काकाले भने । हाकिमकी श्रीमतीले होटल अगाडिको धारोमा थापिएर कपडैसित नुहाउन थाली । ‘एकछिन पछि भात खान पनि नपाइएला । पहिले टन्न भात खाऔँ, त्यसपछि जे पर्छ बेहोरौँला ।’ सबैले मेरो प्रस्ताव स्वीकार गरे ।
भात खाएपछि काकाले शान्ताको सबै नालीबेली बताए । ऊ दंग परी । ‘कता हो त हामीले ज्यान बिसाउने ठाउँ ?’ काकाले सोध्नेबित्तिकै ‘ल आउनुस्’ भन्दै ऊ अघिअघि हिँडी । ‘यही पनि कोही आफन्त आइहाल्नुहुन्छ कि भनेर कसैलाई नदिएर राखेकी थिएँ । जसो–तसो गुजारा गर्नुपर्याे काका ।’ तीनवटा साना खाटहरू भएको कोठामा पुर्याएपछि उसले भनी । ‘ल, अब महिलाहरू एउटा खाटमा सुत्ने, हामीहरू पनि एउटा खाटमा दुईजनाको दरले घन्चमन्च सुतौँ अब ।’ रामप्रसाद काकाले झ्यालनिरको खाटमा पल्टिँदै भने । ‘मेरो त फेर्ने लुगा पनि छैन काका । हेर्नुस न, हिलो पखाल्दा निथ्रुक्क भिजेकी छु । फेर्ने कपडा किन्न जाउँ न । आजै आबुखैरेनी पुगिन्छ भनेर मैले कपडा नलिइकन आएँ ।’ हाकिमकी श्रीमती यसरी बोली, मानौँ उ रामप्रसाद श्रेष्ठकी साख्खै भतिजी हो ।
आँबुखैरेनीमा कुनै सेतो प्लेट भएको गाडी नदेखेपछि मैले शारदातिर फर्किएर सोधेँ, ‘खै, तपाईंलाई लिन गाडी आएन त ?’ ‘बुटवल सिद्धबाबानिर बाटो भत्किएर आउन सकेन रे । उहीँ पर्खिएर बसेको छ रे । मैले बिहानै नेपालगञ्ज फोन गरेर पत्ता लगाइसकेँ नि ।’ ‘धत्तेरिका ! सेतो प्लेटको गाडीमा चढेर जान पाइने भो भनेको त भएन है ।’ रामप्रसादले ठट्टा गर्दै भने । शारदा गम्दारी पाराले हाँसी । उसको हाँसोमा कुनै छलकपट वा उत्ताउलोपनाको आभास पाउन सकिएन ।
हामीले पोखरा जाने गाडी समात्यौँ । त्यहाँदेखि पोखरासम्मको बाटो ठाउँ–ठाउँमा बिग्रिएको थियो तर गाडी हिँड्न नमिल्ने गरी भत्किएको थिएन । दिन सफा थियो । बाटो खराब भएपनि वरिपरि देखिने मनमोहक दृश्य हेर्दै साँझतिर पोखरा पुगियो । हामीहरू बसबाट झर्ने्बित्तिकै बुटवल जाने रात्रीबसको टिकट काट्न गयौँ ।
‘दोभानसम्म बाटो ठीकै छ । त्यहाँबाट उता भने हिँड्नै पर्ला । सुरूमै भनिदिएको राम्रो, हैन त ?’ टिकट काट्ने भाइले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो । चैतन्यले सबैजनाको टिकटको पैसा तिर्याे । शारदाले ‘मैले दिने थिएँ नि दाइ’ भनेर मन दुखाएजस्तो गरी ।
नौडाँडा पुगेपछि रातिको खाना खाइयो । हामीहरू उठ्न नपाउँदै हत्तपत्त गएर शारदाले पैसा तिरी । बस चढेपछि रामप्रसाद काकाले मसँग भने, ‘यो नानी फरासिली रैछ । त्यस्तो उत्ताउलोपन पनि देखिँदैन । कसरी सौतामाथि गइछ ?’
हामीहरू दोभानदेखि पैदल हिड्यौँ । ठाउँ–ठाउँमा घरजत्तिकै ठूला ढुंगाहरू बाटो छेकेर पसारिएका थिए । लेदोसहितको गग्रेटो माटो माथिबाट झरेको–झर्यै थियो । ज्यान जोगाएर कसरी बुटवल पुग्ने होला भन्ने लाग्यो ।शारदा फुर्तीसाथ चैतन्यकी आमाको झोला बोकेर अघिअघि हिँडिरहेकी थिई । अलिपर पुगेपछि एउटा ठूलै ढुंगो बाटो माथिबाट बिस्तारै माटो भत्काउँदै तल झरिरहेको देखियो ।
ए बैनी माथिबाट ढुंगो खस्दैछ, याता फर्कनुस् ।’ चैतन्यले चिच्याएर भन्यो । शारदा तर्सि र ढुंगा खस्नलागेतिरै दौडिई । चैतन्य हाम्फाल्दै गयो र शारदाको हात समातेर दोडाउँदै पछाडि फर्कायो । उनीहरू हामीतिर चारपाइला मात्रै के दौडिएका थिए, त्यो अजंगको ढुंगो ठूलो आवाजका साथ बाटोमा खस्यो । भुईंचालो गएजस्तै बाटो थररर थर्कियो । एक निमेषको अन्तरले चैतन्य र शारदा जोगिए । उनीहरू भक्कानिँदै आएर हामीहरूसँग टाँस्सिए । अप्ठेरो परेको बेलामा औपचारिकताको पर्खाल कहाँ रहन्छ र !
‘ए‘त्यो आइमाइ त एक वचन नबोली गाडी चढेर गई । यता त फर्केर पनि हेरिन ।’ उदेक मान्दै चैतन्यकी आमाले भनिन् । हामीहरू एकछिन मुखामुख गर्यौँ । त्यसपछि झोला बोकेर बुटवलतिर हिड्यौँ ।
‘ए‘हाकिमकी स्वास्नी गइछ ।’ धेरैबेरपछि मौनतालाई तोड्दै रामप्रसाद काकाले भने । हामीहरू फिस्स टर्रो हाँसो हाँस्यौँ ।
janatatimes बाट साभार